Proverbe 122 Akoholahy kelin' Antananarivo : mivoaka maraina , fa tsy mitsindroka . [Veyrières 1913 #2989, Cousins 1871 #61]
Proverbe 335 Ambohimanambola no matavy omby , ka Ambohimalaza no lafo kitay . [Veyrières 1913 #2168]
Proverbe 337 Ambohimanga sy Antananarivo : somotra tsy an-jaza , fa ahy. [Veyrières 1913 #185]
Proverbe 546 Any Betsileo no voky tsaramaso, ka atý Antananarivo no mivozihi-kibo . [Cousins 1871 #265]
Proverbe 568 Antananarivo havana ivatsiana . [Veyrières 1913 #1051]
Proverbe 569 Antananarivo no tsara trano ka Ivakiniadiana no sola vantony . [Rinara 1974 #326, Cousins 1871 #245, Rajemisa 1985]
Proverbe 2016 Fantsakan' Antananarivo , ka ny aloha ihany no aloha. [Rajemisa 1985]
Proverbe 2846 Kasy mivoaka tahaka ny mpanasa lamban' Antananarivo . [Rinara 1974 #1603]
Proverbe 3505 Manan-jara samy monina ny zanak’ Antananarivo , fa lakolosy no mamoha, tafondro no mampandry . [Cousins 1871 #1511]
Proverbe 3801 Manisa ny be tsy ho an' ny tena ohatran' ny vadi-kelin' Antananarivo . [Rinara 1974]
Proverbe 4290 Mirehaka amy ny be tsy ananana, toy ny vadi-kelin’ Antananarivo . [Cousins 1871 #1812]
Proverbe 5386 Ny mpiady tsy misy mpampionina dia ho tonga any Antananarivo . [Veyrières 1913 #3361]
Proverbe 5422 Ny olona mbola tsy teto Antananarivo , raha vao miakatra voalohany eto, dia mikandrakandra be ihany [Ravelojaona 1937 #K.65]
Proverbe 6536 Sasa-lamban' Antananarivo : aleo ho rovitra toy izay tsy madio . [Houlder 1895]
Proverbe 6598 Sisi-hazon' Antanamalaza : mahitsy ihany fa tonontononana ; sisi-hazon' Antananarivo , sady soa no arahim-bankona . [Cousins 1871, Houlder 1895]
Proverbe 6918 Taon-tranon' Antananarivo , ka ny mahavita aloha no manenina . [Rinara 1974 #4113]
Proverbe 7325 Tovolahin' Antananarivo : miasa tsy mahavadi-bainga , nony mihinana atosika ihany. [Rinara 1974 #4230]
Proverbe 7326 Tovolahin' Antananarivo : raha miasa mitsingina, fa raha milalao maka toerana . [Rinara 1974 #274]
Proverbe 7362 Tranon' Antananarivo : malaza am-pahavitany , fa mbola hihoaran' ny hafa. [Rinara 1974 #4386]
Proverbe 7466 Tsy hanondro basy an' Ambohimanga sy Antananarivo . [Veyrières 1913 #463]